Somaliland: Sheekh Aadan Siiro Oo Ku Baaqay In Dalka Laga Badbaadiyo Shabakado Hantidii Dalka Boobay, Umaddiina Cunaha Qabtay Iyo Isku Dul Noolaansho Keeni Kara Qarax Bulsheed - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Sheekh Aadan Siiro Oo Ku Baaqay In Dalka Laga Badbaadiyo Shabakado...
Somaliland: Sheekh Aadan Siiro Oo Ku Baaqay In Dalka Laga Badbaadiyo Shabakado Hantidii Dalka Boobay, Umaddiina Cunaha Qabtay Iyo Isku Dul Noolaansho Keeni Kara Qarax Bulsheed
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Aadan Siiro) oo ka mid ah culimada waaweyn ee Somaliland ayaa ka digay cawaaqib xumo weyn iyo qarax bulsheed oo ka dhalan kara isku dul noolaanshaha dalka ka taagan iyo in hantidii umadda ay kooxo kooban iyo shabakado isku xidhani ka faa’idaystaan iyada oo umadda inteeda kale iyo intii dalkan wax soo gashatay ay bakhtiyayaan ee agoomo leh ee dadka jilicsan lihi taasi oo keeni karta buu yidhi sheekhu in dalkani qarax ka dhaco.
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Aadan Siiro) oo inta badan khudbaddiisa Salaadda Jimce ee Masaajidka Xawaadle kaga hadla xaaladda dalka ayaa ka digay dhibaato weyn oo uu ku tilmaamay in ay dalka ka taagan tahay wakhtigan oo halsi galinaysa jiritaanka qarankan isaga oo umadda ugu baaqay in ay dalka badbaadiyaan gaar ahaana farriin u diray dadka ahlul caqliga ah ee culimada iyo waxgaradka leh.
Sheekh Aadan Siiro waxa uu si gaar ah farta ugu fiiqay shabakadu xidhiidhsan min dibadda illaa gudaha oo dalka u heshiiyey kuwaasi oo hantidii umadda boobay qaab halis ahna ugu mamay awoodda dhaqaale iyo maamul ee qaranka.
Sheekh Aadan Siiro oo arrimahaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Waar dalka haloo tudho ayaan leeyahay. Waar dalka maanta hoos haloo eego. Waxa aynu maraynaa marxalad adag oo kala guur oo aad iyo aad u adag ayuu waddanku marayaa. Waar dadkii way bakhtiyayaan. Waxa aan ku dhashay ninkaygaa aad aragtaan ee cirrada lihi. Maalin walba waxa ku soo maraya nin kaa aqoon badan oo kaa karti badan oo dadkii dalkan wax soo gashaday ah oo bakhtiyaya oo u baahan in raashin loo qaado. Waar dadkii way bakhtiyayaan ee umadda iyo dalkan ha loo gurmado oo ha la badbaadiyo. Waan idiin sheegayaa dalkii maanta waxa ku nool budhcad. Kuwaa maanta caroortoodii Maraykan iyo Yurub wada gaystay waxa ay ku faanaan intaasoo Milyan baan haystaa ayay isugu faanaan. Islaantaa maanta tamaandhada iibinaysa ee tobanka agoon ah haysata ee ah dadkii dalkan u naf waayay ayaa maanta ku nool dalkan. Yaa maanta saladoodu toban kun iyo shan iyo toban kun ay tahay oo bakhtiyaya. Adduunka aynu ku nool nahay kama ay dhicin dadka qaar taariikhdooda la garanayo oo waxa ay ahaan jireen la garanayo oo hantida uu lahaan jiray la garanayo sida ay u nool yihiin. waan idiin sheegayaaye 40 sanadood oo aan taariikhda islaamka wax ka akhriyayay laguma arag dalalka islaamka taasi oo kale. Marka dadku sidaa isugu dul noolaadaa waa waxa keena in ugu dambayn dadka iyo dalku qarxo. Heerka ugu dambeeye marka ay gaadho ayuu qaraxaasi yimaaddaa. Waar waxaan leeyahay dalka haloo tudho. Waar waxaan leeyahay culimada, kuwa aqoonta iyo garashada leh waar dalka ha la badbaadiyo. Dalkan adeer afar iyo shan toona ma laha. Anagu qabaa’ilka lama hadalno inkastoo kuwa danaha leh ay tafsiir ka bixiyaan iyaga oo fooftan habaabinaya umadda uma joojinayno kuwaasiye laakiin qabaa’ilka lama hadalno. Qabaa’ilku waa kuwii dalkan xoreeyey waa kuwii maalkooda iyo naftooda u huray waar qabaa’il haka dhigina kuwa hantida umadda ku mamay. Waa kooxo la yaqaano oo qaar gudaha ay ku jiraan qaarna dibadda ay joogaan qaarna ay meelo badan ku nool yihiin waa shabakad xidhan oo imtixaanka marka la qaadayo la og yahay cidda lagu soo saarayo oo marka qandaraas la bixinayo la og yahay qaabka loo dhigayo oo marka mashruuc xasaasi ahi soo baxo la og yahay shaxda halka la dhigayo waar caqligiinu ha tooso oo dalkani maanta badbaado ayuu u baahanyahee ha la badbaadiyo”. Ayuu yidhi Sheekh Aadan Siiro.